Ukuze uqonde ukuthi ukuxuba kuyinto kosana okungcono, isinyathelo sokuqala ukuba anqume ukuthi yikuphi criteria mums abasha ngokuvamile kufanele sisekelwe uma ukhethiwe. Kukhona imithetho ethize ezivumela ukukhetha eliphezulu futhi ewusizo imvuthuluka ingxube:
ukwakheka yakhelwe kulabo abaneminyaka yobudala kwengane yakho;
akufanele kube iguliswa ingane uqobo noma inhlanganisela yimuphi izingxenye kufakwe ngezithako zawo, ngakho-ke kuhle ukuqala nge amamiksi hypoallergenic;
futhi akufanele kube khona ukungabekezelelani ngazinye zanoma iziphi izakhi ingxube;
kubalulekile ukuthi isisindo okuthayiphwe kancane, hhayi kancane kakhulu, kodwa hhayi ngokushesha kakhulu;
ingane abaphethwe ukuntuleka kwegazi emzimbeni, kubalulekile ukuba ukuthenga ingxube ne wokuqukethwe yensimbi okusezingeni eliphezulu (uma evamile ukuba 1 l of the ukwakheka mayelana 5 g yensimbi, ke anaemia kungcono uma ukubaluleka ungaphakathi uhla kusuka 5 kuya 12 g / l);
Njengoba ukuba lokho ukuxubana kuhamba phambili esanda kuzalwa colic, lapha endaweni yokuqala, Yiqiniso, avalele - zisiza kujwayeleke izitshalo emathunjini bese kuvimbela izimpawu eziningi ezingajabulisi esibhekana nazo;
ukusiza ukuqinisa ingxube mzimba, kufaka phakathi ubulungu amagciwane yayo probiotic;
izingane ngokuvamile kakhulu uhlanze, kutuswa ukuba ukhethe inhlanganisela antireflux.
Ukuze labo abeza esitolo futhi wasikisela ngalokho ukuxubana kuyinto kosana okungcono, abacwaningi benza ucwaningo amancane wenza isilinganiso of ubisi losana.
indawo 10: "Bellakt" (Belarus)
Kufanele kube "Bellakt" endaweni ruble 140-160. Inani zamandla ingxube 507 kcal / 100 g Ukwakheka "Bellakt" Fos prebiotic samanje futhi gos, 78 mg iodine kanye 39 mg taurine.
indawo 9th: "Hipp" (EU)
On umbuzo yini ukuxubana esingcono kakhulu ukuze kuzalwa, nodokotela bezingane eziningi banesibopho, ukuthi kwaba "hippie". Kungani becabanga kanjalo? Kuyinto cishe 2 izikhathi ephakeme "Bellakt" kodwa kuhlanganisa isakhiwo yayo ingxenye demineralized whey powder, 39 mg taurine kanye ne-lactose. Nokho, ingxenye "hippie" unezela umkhiqizi amazambane isitashi, engathandeki ekudleni kwezingane ezincane.
indawo 8: "Agusha" (Russia)
Amandla value "Agusha" kufana nokuthi 520 kilojoule 100 g Ukwakheka iqukethe ama-nucleotide ezibalulekile futhi taurine. Kulaba nemiphumela ethile engathandeki ingashiwo khona amafutha esundu kanye nenani enganele iodine (10 Imininingwane UG).
indawo 7th: "The Kid" (Russia)
Ukwakheka qualitative we zasekhaya amandla ukubaluleka 510 kcal 100 amagremu sicuketse 89 micrograms iodine, whey demineralized powder, 41 mg taurine kanye ne-lactose.
indawo 6th: "Nan" (Netherlands)
Uma ucabanga ukuthi ubisi losana kungcono, "Nan", akungabazeki, uyobe uzipha esinye okukhethwa best. Amandla ukubaluleka ingxube ifinyelela 519 kcal / 100 g Phakathi "Nan" izingxenye taurine samanje (mayelana 40 mg), 93 micrograms iodine, whey demineralized powder kanye namafutha kafishi.
indawo 5th: "Nutrilon Premium" (Netherlands)
476 kcal 100g komkhiqizo - lube nalelo nani elikhulu amandla has omunye omdala futhi kunazo owaziwa emakethe umntwana ubisi lwebhodlela. Ngaphezu kwalokho, e-Ukwakheka sifaka zonke izakhamzimba namaminerali, prebiotics Fos kanye gos, 89 mcg iodine, 39 mg taurine, whey demineralized futhi ama-nucleotide. Izindleko ingxube - ruble 350 kuya 380.
indawo 4th: "Nanny" (New Zealand)
Omunye eqolo (850-1200 r.), Kodwa okungcono usana amafomula emakethe. Okuqukethwe kwalo amandla 100 g 500 kcal. Ngokuqondene iqoqo izakhi ewusizo, - khona-lactose, prebiotic, zemifino amafutha kanye encapsulated amafutha zasemfuleni. Nokho, futhi "Nannie" has nezihibe: ingqikithi 66 micrograms iodine no-32 mg taurine ezikuyo.
indawo 3rd: "Nestozhen" (Switzerland)
Ukuze ruble 200-250, ungakwazi ukuthenga eliphezulu lenhlanganisela ukubaluleka 449 kcal 100 amagremu, okuhlanganisa ekuthuthukiseni ukugayeka kokudla gos prebiotic futhi Fos, whey demineralised powder, i-lactose, futhi mg 36 ka taurine.
indawo 2nd: "Similac" (Denmark)
Amandla value "Similac" ingxube ifinyelela 514 kcal. Phakathi zako ezisemqoka kufanele kuphawulwe ukuthi ayiqukethe amafutha esundu, kodwa kuhlanganisa okuningi njengoba 100 mcg iodine, 34 mg taurine, ama-nucleotide, lactose futhi prebiotics CRP.
indawo 1st: "Baby" (Russia)
Nokho, okuhle kakhulu ingxube for izinsana, ochwepheshe bathi - "Baby". Inani 150-170 p. abazali angakuthola okuqukethwe ingxube whey demineralized, i-lactose, 39 mg taurine, 90 g iodine, omega-6 PUFA and omega-3-nucleotide.
Khetha, zama futhi wabelane ngolwazi lwakho!